CAFFEE – (Onk. 10/2014): Itti gaafatamummaa Ummataafi Heeraan nutti kenname amanamummaa olaanaan hojjechuutu nurraa eegama jedhan Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Sa'adaa Abdurrahman.
Aadde Sa'adaan hasawaa taasisaaniin, qaamolee mootummaa sadeen keessaa Caffeen ykn qaamni seera baaftuu naannichaa gaaffii misoomaa, bulchiinsa gaarii, kenniinsa tajaajilaafi haqaan walqabatee ummanni keenya kaasu deebisuun ergama bakka bu'ummaa isaa qajeelloon bahatee fayyadamummaa ummata isaa mirkaneessuu waan qabuuf, akkasumas, waadaa ummata bakka isa buufateef gale haqummaafi amanamummaa olaanaan tajaajiluuf gurmaa'iinsa haaraa taasisuun hooggansa isaa filatee hojiisaa eegale jedhan.
Caffeen, ergamoota gurguddoo gama hojii seera tumuun, sirna wal hordofuufi to'achuu, Manneen Maree Ummataa sadarkaan jiran cimsuu irratti xiyyeeffatee wayita hojjetutti galmoota Imala Karoora Badhaadhinaa Waggoota Kudhanii Caffee kanaan mirkanaa'e milkeessuuf qooda isaa bahachuu qaba jedhan.
Kanaaf immoo, dandeettii raawwachisummaa Koreewwan Dhaabiifi ogeessota deeggarsa ogummaa kennan cimsuun barbaachisaa waan ta'eef, mata dureewwan adda addaa sadii: gurmaa'ina, hojimaataafi naamusa Caffichaa, sirna hordoffiifi to'annoofi adeemsa seera tumuu irratti ogeessota muuxannoo gahaa qabaniin leenjii kennuuf yaadamee waltajjii qophaa'e ta'uu Aadde Sa'adaan eeraniiru.
Leenjicha irratti Koreewwan Dhaabbii Caffee miseensota isaanii waliiniifi ogeessota deeggarsa ogummaa kennaniif leenjiin guyyoota sadiif Adaamaatti kan kennamu eegaleera.
Toorbee kana 11916
Ji'a kana 45796
2008 irraa eggalee 5459152